कुञ्जल क्रिया : भगाऔं यी रोगहरूलाई
Homeस्वास्थ्यकुञ्जल क्रिया : भगाऔं यी रोगहरूलाई
September 28, 2020 kandai kanda 1 स्वास्थ्य
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण एकातिर सर्वत्र अस्तव्यस्त र त्रास छाएको । यसले हाम्रो स्वास्थ्य सजगता पनि बढाएको छ । औषधि वा उपचार मात्र सबैथोक होइन । खासमा त हामीले आफ्नो शरीरलाई नै रोग प्रतिरोधी बनाउन जरुरी छ । अतः शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने अनेक विधी छन्, जो हाम्रा पूर्खाहरुले गर्दै आए । त्यसमध्येको एक हे, कुन्जल क्रिया ।
योगको अभिन्न अंगको रूमा षट्कर्मलाई लिने गरिन्छ भने यसमध्ये पनि कुञ्जाल कर्म अर्काे महत्वपूर्ण कर्म हो ।
यो कर्म हेर्नको लागि गाह्रो र केहि व्यक्तिमा त भय समेत सिर्जना गर्ने खालको हुन्छ तर वास्तवमा यो कर्म सजिलो छ । केही दिनको अभ्यास पछि यसमा सरलता आउने गर्छ । यसको मुख्य काम शरीरभित्र रहेको विकारलाई सफा गर्नु हो । एकचोटि तपाईंले यस कार्यको प्राविधिक ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भने यो तपाईंका लागि जीवनभर उपयोगी हुनसक्छ ।
आजकल धेरै मानिसहरूले योगका विभिन्न विधि अपनाउने गर्छन् । तर त्यहाँ अझै पनि राम्रो योग गुरुहरूको अभाव छ । हामी धेरैजसो ज्ञान इन्टरनेटबाट स .्कलन गरिरहेका छौं। यसैले व्यक्तिहरू इन्टरनेटमा कुञ्जल क्रियाको बारेमा खोजी गर्छन् ।
कुञ्जल क्रियाको बारेमा मान्छेले इन्टरनेटमा यसरी गर्छन् सर्च
-कसरी गर्ने कुञ्जल क्रिया
–सही तरिकाले गजरनी गर्ने
–उल्टी गर्न सही तरिका
हामी बिहानबिहान शौच, ब्रस आदि गर्ने गर्छाैं । तर शरीरभित्र जम्मा भएको कफलाई सफा गर्दैनौं । यसले हामीलाई विभिन्न समस्या निम्त्याउने गर्छ । त्यसैले सबै राम्रा योगीहरूले आसन प्रदर्शन गर्नुअघि वान्ता गरेर शरीरमा रहेको अशुद्धीलाई प्रदर्शन गर्ने गर्छन् ।
कुन्जाल भनेको के हो?
योगमा शरीरका आन्तरिक अंगहरू सफा गर्ने विभिन्न विधानहरू उल्लेख छन् । यसमा नेती, धोती, बस्ती, नौउली, त्राटक र कपालभाती पर्छन् । धोतीको वास्तविक अर्थ धुनु हो । त्यहाँ धेरै विधिहरू छन्, तीमध्ये एक वमन धोती हो जसलाई कुञ्जाल र गजकर्णी पनि भनिन्छ ।
कुञ्जल क्रिया कसरी गर्ने ?
यो कार्य प्रायः बिहान गरिन्छ तर यो दिनको कुनै पनि समयमा आवश्यकता अनुसार गर्न सकिन्छ । कुञ्जल क्रिया गर्दा बिहान सबैभन्दा पहिले ब्रस गर्नुपर्छ ।
त्यसको लागि कम्तीमा दुई लिटर पानी अट्ने जग र बाल्टिन आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि त्यसमा दुई लिटर तातो पानी राख्नुहोस् । पानी यति तातो होस् जुन हामीले सहन सकौं ।
त्यसपछि कागासनको मुद्रामा बसेर त्यो मनतातो पानी बिस्तारै पिउनुहोस् । धेरै मानिसहरू आरामले दुई लिटर पानी पिउन सक्छन्, तर केहीले केवल एक लिटर मात्रै पिउन सक्छन् ।
पानी त्यतिबेलासम्म नियमित पिइरहनुपर्छ, जतिबेलासम्म वान्ता हुन्छ कि भन्ने महसुस हुँदैन । वान्ता हुन्छ कि जस्तो भएपछि रोकिनुहोस् र आफ्नो दिमागलाई हल्का पार्नुहोस् । त्यसपछि फेरि पानी पिउन सुरु गर्नुहोस् ।
केही समयमा फेरि वान्ता होला जस्तो महसुस हुने गर्छ । त्यसकारण नआत्तिई शान्तिपूर्वक उभिनुहोस् । दुवै खुट्टालाई मिलाउनुहोस् र तिनीहरूलाई कम्मर र खुट्टाको बीचमा ९० डिग्री कोणमा घुमाउनुहोस् र तिनीहरूलाई सीधा राख्नुहोस् । योग संस्थानहरूमा यसको लागी छुट्टै आँगन छ।
के हो विधि ?
बायाँ हात पेटमा राख्नुहोस् र अर्काे हातको बुढी औला र कान्छी औंलालाई पेटले थिच्नुहोस् । तीनै औंलाहरू (साइली औंला, माझी औंंला र चोरी औंला) मुखभित्रै लैजानुहोस् । यी तीन औंंलालाई जिब्रोको अन्तिम भागसम्म लैजानुहोस् ।
यो काम गर्नेबित्तिकै तपाईं बान्ता गर्न थाल्नुहुनेछ । वान्ता हुनेबित्तिकै औैंलालाई बाहिर निकाल्नुहोस् ।
जब तपाईं जिब्रोमा हात लैजानुहुन्छ, तपाईं केही बेरपछि आफैँ बान्ता गर्न थाल्नुहुनेछ । यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि हामीले एउटा झोलामा या बाहिरै वान्ता गरे पनि पानीको पूरा मात्रा निस्कन दिनुहोस् । पहिलो पटक यसमा केही समस्या सिर्जना हुन सक्छ । तर यसलाई यति मनमा राख्नुहोस् कि तपाईंको पेट सफा भइरहेको छ ।
वान्ता हुँदै गएपछि मुखबाट बिस्तारै अमिलो र तीतो पानी बाहिर आउँछ । जब यस्तो पानी आउँछ, बुझ्नुहोस् कि तपाईंको काम ९९ प्रतिशत सम्पन्न भइसक्यो । फेरि एक गिलास तातो पानी पिउनुहोस् र यसलाई बाहिर निकाल्नुहोस् ।
के छ यस भित्रको विज्ञान ?
यो कार्य धेरै वैज्ञानिक तरिकाले गरिएको हुन्छ । यसको उद्देश्य विशेष गरी तपाईंको खानाको पाइप र पेट सफा गर्नु हो । न्यानो पानीले राम्रोसँग सफा गर्ने गर्छ । त्यसैले यसलाई प्रयोग गरिन्छ, तातो पानीले तपाईंको खाना पाइप र पेटमा रहेको चिल्लो फोहोरलाई हटाउन मद्धत गर्छ । यो कार्य दैनिक रूपमा पनि गर्न सकिन्छ ।
बिहानै पनि गर्न सकिन्छ यो कर्म
जे होस् बिहान यस गतिविधि गर्नका लागि उत्तम समय हो । तर केही परिस्थितिमा तपाईंले यसलाई कुनै पनि समयमा गर्न सक्नुहुन्छ । जस्तै, यदि अपच र धेरै खराब आवरण आउँदैछ । तपाईंले केही खाएपछि बेचैन महसुस गर्नुभयो भने पनि यस्तो कर्म गर्न सकिन्छ । यो कार्य सम्पादन गर्दा कतिपय समय पचाइसकेको अन्न पनि बाहिर आउन सक्छ । यदि यस्तो भयो भने पनि चिन्तित हुनु आवश्यक छैन ।
यी रोगहरूबाट छुटकारा पाउनुहोस्
कुञ्जल क्रिया धेरै लाभदायक कर्म हो । सबै उमेरका मान्छेले यो कार्य गर्न सक्छन् । आजको जीवनशैलीमा हामीले धेरै पटक गलत खानेकुरा खाइरहेका हुन्छौं । जसका कारणले हाम्रो पेटमा धेरै विकार जम्मा भएको हुन्छ । कुञ्जल क्रियाले यसलाई उत्तम तरिकाले सफा गर्छ ।
यस गतिविधिलाई नियमित गर्नाले धेरै प्रकारका रोगहरूबाट जोगिन सकिन्छ । यसले अनुहारमा आउँने फोडा, दाँत रोग, जिब्रो र आँखा रोग, हृदय रोग, रगतको विकार, कब्जियत, वक्ष रोग, पित्त, कफ, दम, भोक नलाग्ने, जस्ता समस्याबाट जोगिन सकिन्छ ।-श्रोत :अनलाइन खबर
“हल्का रमाइलो” को ४६ औं भाग यस्तो छ ! हेर्नुहोस् भिडियो
कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई स्वीकृति